Nomupedzachose discontinues njanji drills, halts mumba uye mbiru kugadzira - China Tianjin Longtop Mining
The kambani yakataura kuti kudzidza inokosha inotsiva kuchaita kuti pfungwa zvigadzirwa avo nepfungwa kukura mukana. Nomupedzachose akawedzera kuti kambani yayo navatengesi arambe akazvipira huripo vatengi uye achakutsigira avo mumba uye mbiru uye njanji chibooreso fleets pari ichishanda.
Denise Johnson, boka mutungamiri basa nokuda zvekuvaka Mazinga, akati: "runoita idzi, izvo swatanudza pamwe nomupedzachose kwakaita kuramba kugadzirisa, ichatitendera kuisa zvinhu kune nzvimbo yebhizimisi kuti zvinopa soro, inogona kuenderera kukura uye zvakanakisisa-refu anodzoka. "
The nzvimbo uye mbiru muchivande migodhi zvinhu pasi inokosha ongororo zvinosanganisira kuramba miners, feeder namapoporodzi, marasha haulage hurongwa, highwall miners, denga bolters, utility nemotokari uye Diesel nemotokari. Paaiva pasi review, nomupedzachose achamira achitora maodha itsva.
Zvisinei kugadzirwa njanji drills achaiswa kwakaregwa, uye hapana mirairo itsva richatorwa.
Johnson yakati: "nomupedzachose anoramba vakaita kuti rakakura mugodhi chigadzirwa Portfolio. Tinonyatsobvuma mugodhi chinhu chinokwezva kwenguva refu maindasitiri, uye tirambe vanopedzisira zvakawanda zvigadzirwa, zvose pemvura uye pachivande. Tiri kukanganiswa upfumi hwedu mukati yemigodhi chigadzirwa Portfolio kuti kufunga idzodzo chemhando profitability mukana. Panguva iyoyowo, tinoramba kutarisira kuburikidza wakarebesa pasi-kutenderera munhau yedu. Tinoziva izvi kunopfuurira kugadzirisa zviito havasi nyore yedu kubasa; Ndinoonga nokuda chikwata wedu kuramba kuzvitsaurira. "
Pamwe chete chiziviso, nomupedzachose anotarisira kutora zviito kuderedza vashandi yaro Houston, Pennsylvania, US, apo nenzvimbo uye mbiru zvigadzirwa anogadzirwa. Nepo kambani kuda kutengesa kukamuri uye mbiru zvigadzirwa, zvichaita zvakare kuongorora dzimwe nzira, kusanganisira zvichibvira kuvhara of Houston wechivako.
The kambani yakataura kuti zvachose Kumabasa reductions anosvika 155 nzvimbo chokuita nenzvimbo uye mbiru mabhizimisi vanotarisirwa, vamwe kuitika pakarepo. Yakawedzera kuti zviito izvi zvichava kunyatsotevera swatanudza basa yomuropa uno magumo-musika kudiwa.
In Denison, Texas, apo njanji drills anobudiswa, inenge 40 nzvimbo ichabviswa somugumisiro penzira chibooreso mbudo uye dzimwe nzvimbo kugadzirisa.
Kuwedzera runoita izvi nehonye achaita repurpose yayo Winston-Salem, North Carolina, nzvimbo, transitioning kubvira kuchera kuti njanji jeri kutanga Papera gore rino. Operations richabva kuna Progress Rail, mumwe chose-muridzi nomupedzachose chikamu.
Somugumisiro, kambani achaita suduruka kugadzira dzimwe zvinoriumba zvaishandiswa guru migodhi marori kubva panzvimbo yaro muna Winston-Salem yayo huripo nzvimbo muna Decatur, Illinois.
Nomupedzachose uyewo anoronga kusika vakaomerera mberi tsvakurudzo, chigadzirwa kukura uye utsanzi nezvaanogona nekupesana. Kambani achava kuumba chimwe tsvakurudzo, ano uye chigadzirwa kukura kupesana anunure yepamusoro chigadzirwa Kusiyanisa uye hurongwa kusangana. kuchinja uku hwesangano unoshanda kubva September 1.